September 4, 2021 – Shwe Myanmar
“D Day ဘာကွောငျ့ မစ နိုငျသေးသလဲ/ နှောငျ့နှေးနသေလဲ”
R2P ထက် K2K သာ အားကိုး တိုက်စို့ [ D Day ဘာကြောင့် မစ နိုင်သေးသလဲ/ နှောင့်နှေးနေသလဲ ]
(ထိုကြားစကားမှားနိုင်ပါသည်အကြောင်းကယခုပင်NUGနဲ့EAOsတွေနိုင်ငံအတွက်စစ်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်း‌‌ဆောင်ရွက်ထားပြီမဟုတ်ပါလား) ထိူစကားမှန်မမှန်ထက်အကယ်၍ ဟုတ်ခဲ့လျင်လည်းသိပ်မစိုးရိမ်ရပါဘူးဟု အကြောင်းကထိုပလန်ကိုရိပ်မိသိရှိလို့လား DDayမစသေး၍လားမသိ/စချင်နေသော ကချင်သူရဲကောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကတော့
NUG+EAOs+PDF+GZပြည်သူတို့ပေါင်းပြီးDDayတိုက်ပွဲကို အမြန်အကောငိထည်ဖော် အစပျိုးသင့်ကြောင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို အရင်K2Kလက်စွမ်းနဲ့ ပဲခူးနားထိကျော်တက်လာမှုနဲ့ ခုထိပွဲသိမ်းအောင်မြင်မှုတွေကို ကြည့်ပြီးယုံကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်း အသိပေးရင်း NUGရေReadytoStart ဟုသာ မျက်စိစုံမှိတ်သမလိုက်ပါ အားလုံးပါဝင်လာမည်ဆိုတာယုံကြည်သလို EAOsတွေနဲ့ တိုင်ပင်ကိုက်ပြီးတော်လှန်ရေးကို အဆူံးသတ်နွှဲဖို့ပြင်ဆင်ဖန်တီးပါတော့ ဟု အကြံပြုရင်း အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ပြည်သူ့
R2P ထကျ K2K သာ အားကိုး တိုကျစို့ [ D Day ဘာကွောငျ့ မစ နိုငျသေးသလဲ/ နှောငျ့နှေးနသေလဲ ]
(ထိုကွားစကားမှားနိုငျပါသညျအကွောငျးကယခုပငျNUGနဲ့EAOsတှနေိုငျငံအတှကျစဈရေးအတှကျညှိနှိုငျး‌‌ဆောငျရှကျထားပွီမဟုတျပါလား) ထိူစကားမှနျမမှနျထကျအကယျ၍ ဟုတျခဲ့လငျြလညျးသိပျမစိုးရိမျရပါဘူးဟု အကွောငျးကထိုပလနျကိုရိပျမိသိရှိလို့လား DDayမစသေး၍လားမသိ/စခငျြနသေော ကခငျြသူရဲကောငျးဗိုလျခြုပျကွီးမြားကတော့
NUG+EAOs+PDF+GZပွညျသူတို့ပေါငျးပွီးDDayတိုကျပှဲကို အမွနျအကောငိထညျဖျော အစပြိုးသငျ့ကွောငျး ဟုတျမဟုတျကို အရငျK2Kလကျစှမျးနဲ့ ပဲခူးနားထိကြျောတကျလာမှုနဲ့ ခုထိပှဲသိမျးအောငျမွငျမှုတှကေို ကွညျ့ပွီးယုံကွညျပွီးဆုံးဖွတျနိုငျကွောငျး အသိပေးရငျး NUGရေReadytoStart ဟုသာ မကျြစိစုံမှိတျသမလိုကျပါ အားလုံးပါဝငျလာမညျဆိုတာယုံကွညျသလို EAOsတှနေဲ့ တိုငျပငျကိုကျပွီးတျောလှနျရေးကို အဆူံးသတျနှဲဖို့ပွငျဆငျဖနျတီးပါတော့ ဟု အကွံပွုရငျး အရေးတျောပုံအောငျဖို့ပွညျသူ့
“ပရိသတျကွိုကျစမေဲ့ အကှကျတှသေုံးပွီး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကို ပွနျယူဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ နခွေညျဦး”
ပရိသတ်ကြိုက်စေမဲ့ အကွက်တွေသုံးပြီး ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကို ပြန်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ နေခြည်ဦး
နေခြည်ဦးဆိုသူကတော့ အောင်ရဲလင်းရဲ့ ချစ်သူအဖြစ်အနေနဲ့ လူသိများလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မျက်နှာမှာ ရှိနေတဲ့အမာရွတ်အတွက်အလှတွေပြင်ပြရင်း
သူမကိုယ်သူမ Beauty Blogger တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရင်ထဲမှာတော့
Beauty Blogger ကဝင်းမင်းသန်းတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာတော့ သူမ မသိရော့လေသလားနော်…
သူမရဲ့ အဖေက စစ်တပ်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး
အဖေဖြစ်သူရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သုံးဖြုန်းပြနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ကတော့ အကောင်းစား ပစ္စည်းတွေကို
နေခြည်ဦးဟာ မကြာသေးမီကမှ သူ့ရဲ့ Fan Group တွေထဲမှာ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာပြီး ပရိတ်သတ်နဲ့ ပြန်လည် ထိတွေ့ခဲ့ပါတယ်နော်။
စစ်သား သားသမီးဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးဟာ “ဖေဖေ သမီးဖေဖေ့ကို အရမ်းချစ်တယ်။စစ်သားသားသမီးေ
ဖဖေ့သမီးဖြစ်ရတာလည်း သမီးဘယ်တော့မှ မသိမ်ငယ်ခဲ့ရဘူး။
” အစချီတဲ့ စာတစ်စောင်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ် ရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ဒီစာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အတော့်ကို
ဝေဖန်ဆဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်နော်။ စာထဲမှာ နေခြည်ဦးက သူ့အနေနဲ့ စစ်တပ်ကိုရော၊
စစ်သားတွေကိုရော မမုန်းကြောင်း၊ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုကို
အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက်စေချင်လို့၊ အနိုင်ကျင့်ခံတာတွေ bully လုပ်တာခံနေရတာတွေကို
ကိုယ်ချင်းစာလွန်းလို့ သူ့ရဲ့အသံကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်နော်။
ယခုတလောမှာလည်း မြန်မာ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုသူများကြားမှာ နေခြည်ဦး ပါတီပွဲ တစ်ခု တက်နေတဲ့ပုံတွေပြန့်နှံ့လာပါသေးတယ်။
ခုရက်ပိုင်းမှတော့ နေခြည်ဦးက တစ်တော့မှာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ Tiktok ဆော့နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း သူမကတော့
သူမကို ချစ်သေးရဲ့လားဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ရေးပြီးအဆက်မပြတ် တင်လာခဲ့ပါသေးတယ်. ..
သူမဆော့ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာတော့ သူမကိုဝေဖန်ပြောဆိုထားသူတွေနဲ့စည်ကားလို့နေပြန်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး တစ်ခုခုလောက်ပြောပေးခဲ့ပါအုံးနော်..
နခွေညျဦးဆိုသူကတော့ အောငျရဲလငျးရဲ့ ခဈြသူအဖွဈအနနေဲ့ လူသိမြားလာပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့မကျြနှာမှာ ရှိနတေဲ့အမာရှတျအတှကျအလှတှပွေငျပွရငျး
သူမကိုယျသူမ Beauty Blogger တဈယောကျအဖွဈ သတျမှတျလာခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျတှရေငျထဲမှာတော့ Beauty Blogger ကဝငျးမငျးသနျးတဈယောကျပဲ ရှိတယျဆိုတာတော့ သူမ မသိရော့လသေလားနျော… သူမရဲ့ အဖကေ
စဈတပျထဲက တဈယောကျဖွဈပွီး အဖဖွေဈသူရှာထားတဲ့ ပိုကျဆံတှနေဲ့ သုံးဖွုနျးပွနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ။
နခွေညျကတော့ အကောငျးစား ပစ်စညျးတှကေို သုံးထားနိုငျသူဖွဈတာကွောငျ့ဆယျကြျောသကျအရှယျလေးတှရှေမှေ့ာတော့ အားကစြရာမငျး
သမီးလေးတဈပါးလိုဖွဈနတေော့တာပေါ့သရုပျဆောငျ နခွေညျဦးဟာ မကွာသေးမီကမှ သူ့ရဲ့ Fan Group တှထေဲမှာ
ပွနျလညျ အသကျဝငျလာပွီး ပရိတျသတျနဲ့ ပွနျလညျ ထိတှခေဲ့ပါတယျနျော။
စဈသား သားသမီးဖွဈတဲ့ နခွေညျဦးဟာ “ဖဖေေ သမီးဖဖေကေို့ အရမျးခဈြတယျ။စဈသားသားသမီး ဖဖေသေ့မီးဖွဈရတာလညျး သမီးဘယျတော့မှ မသိမျငယျခဲ့ရဘူး။
” အစခြီတဲ့ စာတဈစောငျကိုဆိုရှယျမီဒီယာပျေါ ရေးသားခဲ့ပါသေးတယျနျော။
ဒီစာကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှကေ အတျော့ကို ဝဖေနျဆဲဆိုခဲ့ကွပါတယျနျော။ စာထဲမှာ နခွေညျဦးက သူ့အနနေဲ့ စဈတပျကိုရော၊ စဈသားတှကေိုရော မမုနျးကွောငျး၊
အမှနျတရားနဲ့ တရားမြှတမှုကို အမွနျဆုံး ပျေါပေါကျစခေငျြလို့၊ အနိုငျကငျြ့ခံတာတှေ bully လုပျတာခံနရေတာတှကေို
ကိုယျခငျြးစာလှနျးလို့ သူ့ရဲ့အသံကို သတ်တိရှိရှိနဲ့ ဖျောပွလိုကျကွောငျး ရေးသားထားပါတယျနျော။
ယခုတလောမှာလညျး မွနျမာ ဆိုရှယျမီဒီယာ အသုံးပွုသူမြားကွားမှာ နခွေညျဦး ပါတီပှဲ တဈခု တကျနတေဲ့ပုံတှပွေနျ့နှံ့လာပါသေးတယျ။
ခုရကျပိုငျးမှတော့ နခွေညျဦးက တဈတော့မှာ ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ Tiktok ဆော့နတေဲ့ဗီဒီယိုတှကေိုလညျး သူမကတော့ သူမကို ခဈြသေးရဲ့လားဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ရေးပွီးအဆကျမပွတျ တငျလာခဲ့ပါသေးတယျ. ..
“ကွီးမားသညျ့ လကျတှကွေောငျ့ ဂဏာနျးဝငျစားတယျဆိုပွီး ပတျဝနျးကငျြ၏ပွောဆိုကဲ့ရဲ့ခွငျးတှကေို ခံနရေသော မိနျးကလေး(ရုပျသံ)”
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Pangasinanပြည်နယ်ရှိ ကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်သော Jessicaအမည်ရှိ အသက် ၂၀ကျော် မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် ပုံမှန်မဟုတ်သည့်
လက်မောင်းနှင့် လက်ချောင်းတို့ကြောင့် စိတ်အားငယ်ပြီး လူကြားထဲမတိုးရဲပဲ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
မိန်းကလေးသည် မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်နှင့် ကြီးမားသည့်လက်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားကာ အများမှ ဂဏာန်းဝင်စားသည်ဟု ဆိုကြပြီး တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့
ပိုပြီးကြီးထွားလာသော်လည်း မိသားစုမှာ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများကြောင့် ဆေးလည်းမကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါ။
မိန်းကလေးသည် ယခုလိုအခြေအနေကြောင့် အခြားသူများဧ။် ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်ခြင်းတွေကို မခံစားနိုင်ပဲ စိတ်အားငယ်နေခဲ့ချိန် သူငယ်ချင်းများမှ
ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းစေချင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို မရှက်ကြောက်ရန် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ Pangasinanပွညျနယျရှိ ကြေးလကျဒသေတှငျ နထေိုငျသော Jessicaအမညျရှိ အသကျ ၂၀ကြျော မိနျးကလေးတဈဦးသညျ ပုံမှနျမဟုတျသညျ့
လကျမောငျးနှငျ့ လကျခြောငျးတို့ကွောငျ့ စိတျအားငယျပွီး လူကွားထဲမတိုးရဲပဲ ဖွဈနခေဲ့သညျ။
မိနျးကလေးသညျ မှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြနှငျ့ ကွီးမားသညျ့လကျမြားကို ပိုငျဆိုငျထားကာ အမြားမှ ဂဏာနျးဝငျစားသညျဟု ဆိုကွပွီး တဈနထေ့ကျတဈနေ့
ပိုပွီးကွီးထှားလာသျောလညျး မိသားစုမှာ စားဝတျနရေေးအခကျအခဲမြားကွောငျ့ ဆေးလညျးမကုသပေးနိုငျခဲ့ပါ။
မိနျးကလေးသညျ ယခုလိုအခွအေနကွေောငျ့ အခွားသူမြားဧ။ျ ကဲ့ရဲ့လှောငျပွောငျခွငျးတှကေို မခံစားနိုငျပဲ စိတျအားငယျနခေဲ့ခြိနျ သူငယျခငျြးမြားမှ
ဘဝကို ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးစခေငျြပွီး ကိုယျ့ရဲ့ဖွဈတညျမှုကို မရှကျကွောကျရနျ ပွောဆိုခဲ့သညျ။
“လကျထပျတော့မညျ့ ယောကျြားလေးတဈယောကျ၏ မြိုး ပှား အ င်ျဂါ ကို လေးခှနဲ့ပဈပွီး စမျးသပျသညျ့ အာဖရိကယဉျကြေးမှု (ရုပျသံ)”
လက်ထပ်တော့မည့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ မျိုးပွားအင်္ဂါကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်သည့် အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု (ရုပ်သံ)
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတ်သူတို့အဖို့ အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှု တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်လာလို့ မိန်းမယူတော့မယ်ဆိုရင်သူလက်ထပ်ယူမည့် မိန်းခလေးရဲ့ဆွေမျိုးထဲက
လူသုံးယောက်ကိုရွေးပြီးသူတို့တော်ရမဲ့ ယောဖဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားလေး မျိုးပွားအင်္ဂါကို လောက်လေးခွနဲ့ သုံးကြိမ် ပစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လောက်လေးခွနဲ့ သုံးကြိမ်ပစ်လိုက်တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေရင် သူတို့ရဲ့ နှမလေးနဲ့ ပေးစားပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ နှမလေး ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းဟာ ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အဲ့ဒီ ယဉ်ကျေးမှုကြီးက ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ထိပ်လန့်စရာကြီးပါနော်။
စာဖတ်သူ ပရိသတ်ကြီးတို့ဆိုရင်ရော ဒီလိုမျိုး အစမ်းသပ် ခံနိုင်ပါ့မလား။
မင်မင်ကတော့ တွေးကြည့်ယုံနဲ့တင် ကျောချမ်းလာတာပါနော်။
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကျန်းမာ၊ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝရဲ့နေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးတို့ရေ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတျသူတို့အဖို့ အာဖရိက ယဉျကြေးမှု တဈမြိုးနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့ ယောကျြားလေးတဈယောကျဟာ အရှယျရောကျလာလို့ မိနျးမယူတော့မယျဆိုရငျသူလကျထပျယူမညျ့ မိနျးခလေးရဲ့ဆှမြေိုးထဲက
လူသုံးယောကျကိုရှေးပွီးသူတို့တျောရမဲ့ ယောဖဖွဈသူရဲ့ယောကျြားလေး မြိုးပှားအင်ျဂါကို လောကျလေးခှနဲ့ သုံးကွိမျ ပဈရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ နှမလေး ပိုငျဆိုငျရမယျ့ ဇိမျခံပစ်စညျးဟာ ကောငျးမကောငျး စမျးသပျကွညျ့တဲ့သဘောပဲ ဖွဈပါတယျတဲ့။
အဲ့ဒီ ယဉျကြေးမှုကွီးက ယောကျြားလေးတှအေတှကျတော့ တကယျ့ကို ထိပျလနျ့စရာကွီးပါနျော။
စာဖတျသူ ပရိသတျကွီးတို့ဆိုရငျရော ဒီလိုမြိုး အစမျးသပျ ခံနိုငျပါ့မလား။
မငျမငျကတော့ တှေးကွညျ့ယုံနဲ့တငျ ကြောခမျြးလာတာပါနျော။
ပရိသတျကွီးတို့လညျး ကနျြးမာ၊ပြျောရှငျတဲ့ ဘဝရဲ့နရေ့ကျတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျး တောငျးလိုကျရပါတယျနျော။
“သားအမိနှဈယောကျ ထမငျးလကျဆုံစားနရောကနေ ခုလို့ကိုယျ့သားလေးဖွဈသှားတော့ မိခငျကွီးရငျကှဲရပွီပေါ့……”
စမ်း/မြောက်မှာ ဖမ်းဆီးနေတယ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာ စမ်း/တောင်က သားအမိနှစ်ယောက်က ထမင်းလက်ဆုံစားပြီး စကားတွေပြောနေကြတယ်။
ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ကားတံခါးတွေပိတ်ပြီးတော့ တိုက်တွေကိုသေနတ်နဲ့ချိန်တယ်။ “အထဲကိုဝင် မစပ်စုနဲ့ပစ်ထည့်လိုက်မယ်”ဆိုတဲ့ချိန်းခြောက်သံတွေ ဆူညံသွားတဲ့လမ်း….
လှေကားကိုရိုက်ဖျက် စာရွက်ကိုကြည့်ပြီး အခန်းထဲကိုဇွတ်အတင်းဝင်သံတွေကို တလမ်းလုံးရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နားထောင်နေရတယ်။
ငါ့ကိုများလား ..ငါ့မိသားစုကိုများလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ သားအမိနှစ်ယောက်ကတယောက်လက်ကို တယောက်ဆုပ်ကိုင်လို့ ..
ခဏအကြာ“ကျွန်မသားလေး ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ မဖမ်းပါနဲ့” ဆိုပြီးငိုရင်းတောင်းပန်တဲ့အသံတွေ။
“အမေနဲ့မဆိုင်ဘူး အမေနေခဲ့မလာနဲ့ “ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ…သားကို ကားပေါ်ဆွဲတင်သွားတော့ ဖိနပ်တောင်မပါဘူးနောက်က ငိုရင်းပြေးလိုက်လာတဲ့အမေ။
သားလေးပါတဲ့ကားထွက်သွားတော့ ငိုရင်းတိုက်ပေါ်ပြန်တက်လာပြီး အရုပ်ကျိုးပြတ် အသက်မဲ့သလိုထိုင်ချပြီး ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်မိတယ်။
အဖြစ်အပျက်တွေက မြန်လွန်းလို့ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေရှာမှာ။
စောနကလေးတင် ငါ့သားလေး ငါနဲ့ထမင်းစားနေတာ ။ ဒီနားလေးမှာ သူထိုင်နေခဲ့တာ ….. ခုတော့…..
(လွန်ခဲ့တဲ့နာရီဝက်ကမှ မျက်စိရှေ့တင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လူအချင်းချင်း အမုန်းပွားခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ……
သားအမိနှဈယောကျ ထမငျးလကျဆုံစားနရောကနေ ခုလို့ကိုယျ့သားလေးဖွဈသှားတော့ မိခငျကွီးရငျကှဲရပွီပေါ့……
စမျး/မွောကျမှာ ဖမျးဆီးနတေယျတဲ့ဆိုတဲ့သတငျးတှတေကျလာတဲ့အခြိနျမှာ စမျး/တောငျက သားအမိနှဈယောကျက ထမငျးလကျဆုံစားပွီး စကားတှပွေောနကွေတယျ။
ဝုနျးဝုနျးဒိုငျးဒိုငျးနဲ့ ကားတံခါးတှပေိတျပွီးတော့ တိုကျတှကေိုသနေတျနဲ့ခြိနျတယျ။ “အထဲကိုဝငျ မစပျစုနဲ့ပဈထညျ့လိုကျမယျ”ဆိုတဲ့ခြိနျးခွောကျသံတှေ ဆူညံသှားတဲ့လမျး….
လှကေားကိုရိုကျဖကျြ စာရှကျကိုကွညျ့ပွီး အခနျးထဲကိုဇှတျအတငျးဝငျသံတှကေို တလမျးလုံးရငျတထိတျထိတျနဲ့နားထောငျနရေတယျ။
ငါ့ကိုမြားလား ..ငါ့မိသားစုကိုမြားလားဆိုတဲ့စိုးရိမျမှုတှနေဲ့ သားအမိနှဈယောကျကတယောကျလကျကို တယောကျဆုပျကိုငျလို့ ..
ခဏအကွာ“ကြှနျမသားလေး ဘာမှမလုပျပါဘူး။ မဖမျးပါနဲ့” ဆိုပွီးငိုရငျးတောငျးပနျတဲ့အသံတှေ။
“အမနေဲ့မဆိုငျဘူး အမနေခေဲ့မလာနဲ့ “ဆိုတဲ့ စိုးရိမျပူပနျမှုတှေ…သားကို ကားပျေါဆှဲတငျသှားတော့ ဖိနပျတောငျမပါဘူးနောကျက ငိုရငျးပွေးလိုကျလာတဲ့အမေ။
သားလေးပါတဲ့ကားထှကျသှားတော့ ငိုရငျးတိုကျပျေါပွနျတကျလာပွီး အရုပျကြိုးပွတျ အသကျမဲ့သလိုထိုငျခပြွီး ဟိုဟိုဒီဒီကွညျ့မိတယျ။
အဖွဈအပကျြတှကေ မွနျလှနျးလို့ မယုံနိုငျအောငျဖွဈနရှောမှာ။
စောနကလေးတငျ ငါ့သားလေး ငါနဲ့ထမငျးစားနတော ။ ဒီနားလေးမှာ သူထိုငျနခေဲ့တာ ….. ခုတော့…..
(လှနျခဲ့တဲ့နာရီဝကျကမှ မကျြစိရှတေ့ငျတကယျဖွဈခဲ့တာပါ။ လူအခငျြးခငျြး အမုနျးပှားခွငျး ကငျးဝေးကွပါစေ……
“အကွပျအတညျးကာလ မညျသူမဆို ခြေးငှယေူနိုငျ”
“အကြပ်အတည်းကာလ မည်သူမဆို ချေးငွေယူနိုင်”
အစိုးရ ဝန်ထမ်းများမှ မဟုတ်ပါဘူး.. မည်သူမဆို ဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှ ပြစရာမလိုပဲ အတိုးနဲနဲနဲ့
ချေးငွေကို ချက်ချင်း ချေးယူလို့ရပါပြီ…
လတ်တလောငွေကြေးတကယ် အခက်အခဲရှိ သူများအတွက် သတင်းကောင်းပါ ။
များသောအားဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ဝင်ငွေစသည်ဖြင့် ပြကြရပြီး ထောက်ခံချက် ၊
အာမခံသူ စသဖြင့် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပြီးမှ ချေးငွေဆိုတာမျိုးက ချထားပေးတာပါ …
အခုဟာကေတာ့ အဲ့ဒါတွေ မလိုပါဘူး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကနေ ချေးငွေပေးနေတာပါ ။
ကိုယ်ပိုင် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဟန်းဆက်နဲ့ အမြဲအသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းဆင်းကဒ်လေး ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။
လတ္တေလာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး၊ အကြောင်းကိစ္စအမျိုးမျိုးနဲ့ ချေးငွေရယူချင်သူတွေအတွက်
တော်တော်လေး အဆင်ပြေလို့ ပြန်လည် မျှဝေတာပါဗျ ။
ပြန်ဆပ်ရတဲ့ ပုံစံကလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ဘဏ်တွေ ဘာတွေကနေ သွားသွင်းစရာမလိုပါဘူး …
Mpt ဆိုရင် 800#
Telenor ဆိုရင် 500 #
Mytel ဆိုရင် 966 948 #
Ooredooဆိုရင် 125 #
ကိုနှိပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ရလာပါလိမ့်မယ်..
တကယ်ချေးငွေ ရတာနော်။ အခုချက်ချင်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
အစိုးရ ဝနျထမျးမြားမှ မဟုတျပါဘူး.. မညျသူမဆို ဘာပိုငျဆိုငျမှုမှ ပွစရာမလိုပဲ
အတိုးနဲနဲနဲ့ ခြေးငှကေို ခကျြခငျြး ခြေးယူလို့ရပါပွီ…
လတျတလောငှကွေေးတကယျ အခကျအခဲရှိ သူမြားအတှကျ သတငျးကောငျးပါ ။
မြားသောအားဖွငျ့ ပိုငျဆိုငျမှု ၊ ဝငျငှစေသညျဖွငျ့ ပွကွရပွီး ထောကျခံခကျြ ၊
အာမခံသူ စသဖွငျ့ စဈဆေးမှုတှေ လုပျပွီးမှ ခြေးငှဆေိုတာမြိုးက ခထြားပေးတာပါ …
အခုဟာကတော့ အဲ့ဒါတှေ မလိုပါဘူး မွနျမာ့ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးကနေ ခြေးငှပေေးနတောပါ ။
ကိုယျပိုငျ လကျရှိသုံးနတေဲ့ ဟနျးဆကျနဲ့ အမွဲအသုံးပွုနတေဲ့ ဖုနျးဆငျးကဒျလေး ရှိဖို့တော့ လိုပါတယျ။
လတ်တလော အခကျအခဲအမြိုးမြိုး၊ အကွောငျးကိစ်စအမြိုးမြိုးနဲ့ ခြေးငှရေယူခငျြသူတှအေတှကျ
တျောတျောလေး အဆငျပွလေို့ ပွနျလညျ မြှဝတောပါဗြ ။
ပွနျဆပျရတဲ့ ပုံစံကလညျး အဆငျပွပေါတယျ။
ဘဏျတှေ ဘာတှကေနေ သှားသှငျးစရာမလိုပါဘူး …
Mpt ဆိုရငျ 800#
Telenor ဆိုရငျ 500 #
Mytel ဆိုရငျ 966 948 #
Ooredooဆိုရငျ 125 #
ကိုနှိပျပွီး ဖုနျးချေါလိုကျတာနဲ့ ခကျြခငျြး ရလာပါလိမျ့မယျ..
တကယျခြေးငှေ ရတာနျော။ အခုခကျြခငျြးစမျးကွညျ့လိုကျပါ။
“သမေညျ့နကေို့ ရှပေ့ဈနိုငျတဲ့ ကုသိုလျမြား”
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ဗေဒင်ကျွမ်းကျင်သော ပုဏ္ဏားမိသားစုရှိရာတွင် ပုဏ္ဏားကြီးသည်
မိမိကိုယ်ကို ဗေဒင်တွက်ကြည့်ရာ အသက် (၆၀)ပြည့်သည့်နေ့တွင် သေရမည်ကို သိလေ၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားကို မကိုးကွယ်သော်လည်း သေရမည်ကို ကြောက်လန့်၍ ဘုရားထံ သွားလေ၏။
ဘုရားရှင်ထံရောက်သော် မြတ်စွာဘုရားက ” မှန်၏။ အသက် (၆၀) နေမွန်းတည့်ချိန်တွင် သေမည်။
သေလျှင် မြောက်ဘက် တောတန်းတွင် မျောက်ဖြစ်လိမ့်မည် ” ဟု ဟောကြား လိုက်လေသည်။
ပုဏ္ဏားလည်း အိမ်ပြန်ပြီး မျောက်ဘဝ၌ စားရန် တောတန်းတွင်—
စသည်တို့ကို လုပ်သော် ထိုအတွက်ကြောင့် လူအများ သွားလာ ရပ်နားမှု အဆင်ပြေနေတော့သည်။
အသက်(၆၀) ပြည့်၍ မသေသောအခါ ဘုရားရှင်ထံ သွားရောက် အပြစ်တင်လေ၏။မြတ်စွာဘုရားက ကိုယ်ကျိုးအတွက် မဟုတ်ဘဲ
အများအတွက် ပြုလုပ်ပေးသော အောက်ပါ ကုသိုလ်များသည် သေနေ့ကိုပင် ရွှေ့ပစ်နိုင်သည်ဟု ဟောပြလေရာ
ပုဏ္ဏားမိသားစု ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်း၍ သောတာပန် တည်လေ၏။
(၁) အများစားသုံးရန် ဥယျာဉ်စိုက်ခြင်း
(၂) အများစားသုံးရန် အရန်စိုက်ခြင်း
(၆) အများသောက်သုံးနိုင်ရန် ရေတွင်းရေကန် တူးပေးခြင်း
မှတ်ချက် ။ ။ “အရန်” စိုက်သည် ဆိုသည်မှာ မိမိနေအိမ်၊ နေရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အများအတွက် သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သေနေ့ကို ရွှေ့နိုင်သော ကုသိုလ်ထူးများ ရရှိနိုင်ကြပါစေ။
သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရား ဟောကြားတော် မူအပ်သော အာယုဒီဃ (၆)ပါးကို အကျဉ်း ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
crd; အောင် နိုင်
မွတျစှာဘုရား သကျတျောထငျရှား ရှိစဉျက ဗဒေငျကြှမျးကငျြသော ပုဏ်ဏားမိသားစုရှိရာတှငျ ပုဏ်ဏားကွီးသညျ
မိမိကိုယျကို ဗဒေငျတှကျကွညျ့ရာ အသကျ (၆၀)ပွညျ့သညျ့နတှေ့ငျ သရေမညျကို သိလေ၏။
ထိုအခါ မွတျစှာဘုရားကို မကိုးကှယျသျောလညျး သရေမညျကို ကွောကျလနျ့၍ ဘုရားထံ သှားလေ၏။
ဘုရားရှငျထံရောကျသျော မွတျစှာဘုရားက ” မှနျ၏။ အသကျ (၆၀) နမှေနျးတညျ့ခြိနျတှငျ သမေညျ။
သလြှေငျ မွောကျဘကျ တောတနျးတှငျ မြောကျဖွဈလိမျ့မညျ ” ဟု ဟောကွား လိုကျလသေညျ။
ပုဏ်ဏားလညျး အိမျပွနျပွီး မြောကျဘဝ၌ စားရနျ တောတနျးတှငျ—
စသညျတို့ကို လုပျသျော ထိုအတှကျကွောငျ့ လူအမြား သှားလာ ရပျနားမှု အဆငျပွနေတေော့သညျ။
အသကျ(၆၀) ပွညျ့၍ မသသေောအခါ ဘုရားရှငျထံ သှားရောကျ အပွဈတငျလေ၏။မွတျစှာဘုရားက ကိုယျကြိုးအတှကျ မဟုတျဘဲ
အမြားအတှကျ ပွုလုပျပေးသော အောကျပါ ကုသိုလျမြားသညျ သနေကေို့ပငျ ရှပေ့ဈနိုငျသညျဟု ဟောပွလရော
ပုဏ်ဏားမိသားစု ဗုဒ်ဓဘာသာသို့ ကူးပွောငျး၍ သောတာပနျ တညျလေ၏။
(၁) အမြားစားသုံးရနျ ဥယြာဉျစိုကျခွငျး
(၂) အမြားစားသုံးရနျ အရနျစိုကျခွငျး
(၃) အမြားနရေနျ ဇရပျဆောကျပေးခွငျး
(၄) အမြားသှားလာနိုငျရနျ လမျးဖောကျပေးခွငျး
(၅) အမြားသှားလာနိုငျရနျ တံတားဆောကျပေးခွငျး
(၆) အမြားသောကျသုံးနိုငျရနျ ရတှေငျးရကေနျ တူးပေးခွငျး
မှတျခကျြ ။ ။ “အရနျ” စိုကျသညျ ဆိုသညျမှာ မိမိနအေိမျ၊ နရော၊ ပတျဝနျးကငျြတှငျ အမြားအတှကျ သဈပငျ စိုကျပြိုးပေးခွငျး ဖွဈပါသညျ။
သနေကေို့ ရှနေို့ငျသော ကုသိုလျထူးမြား ရရှိနိုငျကွပါစေ။
သီတဂူ ဆရာတျောဘုရား ဟောကွားတျော မူအပျသော အာယုဒီဃ (၆)ပါးကို အကဉျြး ဖျောပွခွငျး ဖွဈပါသညျ။
crd; အောငျ နိုငျ
ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်နေပုံလေးကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဖြေတခုကတော့ ထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အိပ်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုပုံနဲ့ အိပ်နေတယ်ဆိုတာကို တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြည့်ခိုင်းမှ ရမယ်ထင်တယ်နော်။
ပုံပါအတိုင်း အိပ်တတ်သောသူကတော့ သူ့ကိုကြည့်ရတာ အိပ်နေတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ထင်ရပင်မဲ့ သူလိုလူမျိုးက အရမ်းကို စည်းကမ်းကြီးသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင်နေတတ်သူပါ။ သူများကိုလည်း ယုံကြည်သလို၊ သူကိုလည်း ယုံကြည်သူ ပေါများပါလိမ့်မယ်။
၀၂. လိုချင်၊ ပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်များသူ။
ပုံပါအတိုင်း အိပ်တတ်သူကတော့ လိုချင်စိတ်၊ တက်မက်တောင့်တစိတ်များသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အပြင်ပိုင်းကြည့်ရင်တော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့် လူချစ်လူခင်များမှာပါ။
တဖက်မှာလည်း လူတွေကို တော်တော်နဲ့ မယုံကြည်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တခုခုကို ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် တော်ရုံနဲ့ မဆုံးဖြတ်နိုင်သူပါ။
ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့ လုပ်စရာရှိတာကို တည့်တည့်မတ်မတ်သာ လုပ်သွားနိုင်သူပါ။
၀၃. စည်းကမ်းအတိုင်း နေထိုင်သူ။
ပုံပါအတိုင်း အိပ်တတ်သူကတော့ သာမန်အိပ်ပုံဖြစ်တာကြောင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးရတာကို သဘောကျသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြီး အပျော်အရွှင် ကိစ္စတွေကို မကြိုက်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။
၀၄. ပွဲလမ်းသဘင် ကြိုက်သောသူ။
ပုံပါအတိုင်း အိပ်တတ်သူကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အလိုက်သင့်ပေါင်းသင်းတတ်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေထိုင်တတ်သူပါ။ ပြီးတော့ အပျော်အပါး ကြိုက်နှစ်သက်သူပါ။
ဒါပင်မဲ့ သူ့မှာ အခြားသူတွေကို မပြောနိုင်တဲ့ လှိူ့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နှစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူတပါးစကားကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရတတ်ပါတယ်။
ပုံပါအတိုင်း အိပ်တတ်သူကတော့ သိပ်မရှိပါ။ သူငယ်ချင်းကို အလွန်ခုံမင်တတ်သူပါ။ မိသားစုအရေးထက် သူငယ်ချင်းများအတွက် အချိန်ပေးတတ်သူပါ။
ပုံပါအတိုင်း အိပ်တတ်သူကတော့ အများစုဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကို ရှက်တတ်သူဖြစ်ပြီး ပြသာနာတခုခုတတ်ပြီဆိုရင် တစိမ့်စိမ့်နဲ့ စဉ်းစားနေသူပါ။
စဉ်းစားလွန်တတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပင်ပန်းပြီး လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်နိုင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Em Em
ပုံပါအတိုငျး အိပျတတျသောသူကတော့ သူ့ကိုကွညျ့ရတာ အိပျနတော အဆငျမပွဘေူးလို့ထငျရပငျမဲ့ သူလိုလူမြိုးက အရမျးကို စညျးကမျးကွီးသူဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဘယျသူနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ အဆငျပွအေောငျနတေတျသူပါ။ သူမြားကိုလညျး ယုံကွညျသလို၊ သူကိုလညျး ယုံကွညျသူ ပေါမြားပါလိမျ့မယျ။
ပုံပါအတိုငျး အိပျတတျသူကတော့ လိုခငျြစိတျ၊ တကျမကျတောငျ့တစိတျမြားသူဖွဈပါလိမျ့မယျ။
အပွငျပိုငျးကွညျ့ရငျတော့ လှတျလှတျလပျလပျနထေိုငျတတျသူဖွဈတာကွောငျ့ လူခဈြလူခငျမြားမှာပါ။ တဖကျမှာလညျး လူတှကေို တျောတျောနဲ့ မယုံကွညျသူဖွဈပါလိမျ့မယျ။
တခုခုကို ဆုံးဖွတျတော့မယျဆိုရငျ တျောရုံနဲ့ မဆုံးဖွတျနိုငျသူပါ။ ဆုံးဖွတျပွီးသှားရငျတော့ လုပျစရာရှိတာကို တညျ့တညျ့မတျမတျသာ လုပျသှားနိုငျသူပါ။
ပုံပါအတိုငျး အိပျတတျသူကတော့ သာမနျအိပျပုံဖွဈတာကွောငျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးအတိုငျး လိုကျနာကငျြ့သုံးရတာကို သဘောကသြူဖွဈပါလိမျ့မယျ။
စိတျဓာတျခိုငျမာပွီး အပြျောအရှငျ ကိစ်စတှကေို မကွိုကျသူဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အနာဂတျအတှကျ ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ လြှောကျလှမျးနသေူဖွဈပါတယျ။
ပုံပါအတိုငျး အိပျတတျသူကတော့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ အလိုကျသငျ့ပေါငျးသငျးတတျပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနထေိုငျတတျသူပါ။ ပွီးတော့ အပြျောအပါး ကွိုကျနှဈသကျသူပါ။
ဒါပငျမဲ့ သူ့မှာ အခွားသူတှကေို မပွောနိုငျတဲ့ လှိူ့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ ပွညျ့နှဈနတေတျပါတယျ။ သူတပါးစကားကွောငျ့ စိတျဆငျးရဲရတတျပါတယျ။
ပုံပါအတိုငျး အိပျတတျသူကတော့ အမြားစုဖွဈပါတယျ။ အရမျးကို ရှကျတတျသူဖွဈပွီး ပွသာနာတခုခုတတျပွီဆိုရငျ တစိမျ့စိမျ့နဲ့ စဉျးစားနသေူပါ။
စဉျးစားလှနျတတျသူဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျပငျပနျးပွီး လုပျသငျ့တဲ့ အလုပျကို မလုပျနိုငျဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ Em Em
“သမီးမိုကျမဖွဈစနေဲ့ ( အရမျးကောငျးလို့ဖတျစခေငျြ)”
စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့ .ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါတယ် ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော်တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ် ၊ တစ်နေ့ သမီးလေးဟာ အတန်းတင် စာမေးပွဲမှာ ပထမ ရတယ် ။
နောက်တစ်နေ့မှာ အဖေဟာ သမီးလေး လိုချင်တဲ့ အဝတ်တစ်စုံကို ပေးလိုက် တယ် ၊ သမီးလေးဟာ ဝတ်ကြည့်ပြီး မှန်ရှေ့မှာ ပျော်လို့ ၊ အဖေ ကလည်း
သမီးလေးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ မျက်ရည် စို့နေရှာ တယ် ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ ။
ညရောက်တော့ အမေက သူ့ယောက်ျားကို မေးတယ် ၊ ပိုက်ဆံ ဘယ်ကရသလဲပေါ့? ဆေးရုံ တစ်ခုမှာ ငါ့ သွေးဖောက်ရောင်းလိုက်တာတဲ့ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူး အများကြီး ရပြီး အောင်သွားတယ် ၊
ဆေး တက္ကသိုလ် တက်ဖို့ အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်း သိလို့ မပူဆာ ပါဘူး ၊ တစ်ပတ် လောက်ကြာတော့ အဖေက ပိုက်ဆံတွေ ထည့်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်ကြီးကို ပြပြီး
သမီးမပူနဲ့ ၊ အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှိတယ် ၊ သမီး ဆရာဝန် ဖြစ်တဲ့ထိ လုံလောက် ပါတယ်တဲ့ ။
သမီးလည်း ဝမ်းသာလွန်းလို့ ထ ကနေတယ် ၊ အဖေ ခမျာလည်း သမီးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ ပါးပြင် ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ ။
ညကျတော့ အမေက သူ့ယောက်ျားကို မေးတယ် ၊ ဒီ လောက်များတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရလာသလဲပေါ့ ? တစ်လောက ငါ့ကျောက်ကပ် ၂ ခုထဲက တစ်ခုကို ရောင်းလိုက်တယ်တဲ့ ၆ နှစ်ကြာ သွားပြီး ၊
အပျော်ဆုံး နဲ့ ဂုဏ်အယူ ရဆုံးနေ့ ၊ သမီးလေး ဆေးကျောင်းအောင် သွားပြီး ၊ အိမ်ပြန်လာတော့မယ် ၊ တဲအိမ်လေးကို အကောင်းဆုံးပြင်ထားတယ် ။
အိမ်ရှေ့မှာ မြင်းလှည်းတွေ ရပ်သံ ကြားရတယ် ၊ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး ဝမ်းသာအားရ ပြေးထွက်လာတယ်
ဟုတ်ပါတယ် ၊ သမီးလေး ပြန်လာတာပါ ၊ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်လျှက် မဟုတ်ပါ ၊ ပိတ်ဖြူအုပ်ထား တဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပ်အလောင်း ။
လာပို့တဲ့ သူတွေထဲက လူကြီး တစ်ယောက်က ပြော တယ် ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရည်းစားပစ်သွားလို့ မနေ့ညက အဆိပ်သောက် သတ်သေသွားတယ်တဲ့ ။
စဉ်းစားစရာ အတွေးလေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
မိမိကို မနှစ်သက် လို့ စွန့်ခွာ သွားသူ အတွက် အသက် ပေးသင့် သလား ?
မိမိ အတွက် အနစ်နာခံ ခဲ့သူတွေ အတွက် အသက်ပေးဖို့ မသင့် ဘူးလား ?
စာဖတျမပငျြးပါနဲ့ .ဖတျကွညျ့စေ ခငျြပါတယျ ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆငျးရဲတဲ့ လငျမယား ၂ ယောကျမှာ စာတျောတဲ့ သမီးလေး ရှိတယျ ၊ တဈနေ့ သမီးလေးဟာ အတနျးတငျ စာမေးပှဲမှာ ပထမ ရတယျ ။
နောကျတဈနမှေ့ာ အဖဟော သမီးလေး လိုခငျြတဲ့ အဝတျတဈစုံကို ပေးလိုကျ တယျ ၊ သမီးလေးဟာ ဝတျကွညျ့ပွီး မှနျရှမှေ့ာ ပြျောလို့ ၊ အဖေ ကလညျး
သမီးလေးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ မကျြရညျ စို့နရှော တယျ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ ။
ညရောကျတော့ အမကေ သူ့ယောကျြားကို မေးတယျ ၊ ပိုကျဆံ ဘယျကရသလဲပေါ့? ဆေးရုံ တဈခုမှာ ငါ့ သှေးဖောကျရောငျးလိုကျတာတဲ့ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တနျးကို ဂုဏျထူး အမြားကွီး ရပွီး အောငျသှားတယျ ၊
ဆေး တက်ကသိုလျ တကျဖို့ အဖမှေ့ာ ပိုကျဆံ မရှိမှနျး သိလို့ မပူဆာ ပါဘူး ၊ တဈပတျ လောကျကွာတော့ အဖကေ ပိုကျဆံတှေ ထညျ့ထားတဲ့ လှယျအိတျကွီးကို ပွပွီး
သမီးမပူနဲ့ ၊ အဖမှေ့ာ ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီးရှိတယျ ၊ သမီး ဆရာဝနျ ဖွဈတဲ့ထိ လုံလောကျ ပါတယျတဲ့ ။
သမီးလညျး ဝမျးသာလှနျးလို့ ထ ကနတေယျ ၊ အဖေ ခမြာလညျး သမီးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ ပါးပွငျ ပျေါမှာ မကျြရညျတှနေဲ့ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ ။
ညကတြော့ အမကေ သူ့ယောကျြားကို မေးတယျ ၊ ဒီ လောကျမြားတဲ့ ပိုကျဆံ ဘယျလိုရလာသလဲပေါ့ ? တဈလောက ငါ့ကြောကျကပျ ၂ ခုထဲက တဈခုကို ရောငျးလိုကျတယျတဲ့ ၆ နှဈကွာ သှားပွီး ၊
အပြျောဆုံး နဲ့ ဂုဏျအယူ ရဆုံးနေ့ ၊ သမီးလေး ဆေးကြောငျးအောငျ သှားပွီး ၊ အိမျပွနျလာတော့မယျ ၊ တဲအိမျလေးကို အကောငျးဆုံးပွငျထားတယျ ။
အိမျရှမှေ့ာ မွငျးလှညျးတှေ ရပျသံ ကွားရတယျ ၊ လငျမယား နှဈယောကျစလုံး ဝမျးသာအားရ ပွေးထှကျလာတယျ
ဟုတျပါတယျ ၊ သမီးလေး ပွနျလာတာပါ ၊ဒါပမေဲ့ အသကျရှငျလြှကျ မဟုတျပါ ၊ ပိတျဖွူအုပျထား တဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပျအလောငျး ။
လာပို့တဲ့ သူတှထေဲက လူကွီး တဈယောကျက ပွော တယျ ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရညျးစားပဈသှားလို့ မနညေ့က အဆိပျသောကျ သတျသသှေားတယျတဲ့ ။
စဉျးစားစရာ အတှေးလေးပေးလိုကျပါတယျဗြာ ။
မိမိကို မနှဈသကျ လို့ စှနျ့ခှာ သှားသူ အတှကျ အသကျ ပေးသငျ့ သလား ?
မိမိ အတှကျ အနဈနာခံ ခဲ့သူတှေ အတှကျ အသကျပေးဖို့ မသငျ့ ဘူးလား ?